The ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ ntinye akwụkwọ n'ihu bụ na bụghị nanị na ntinye akwụkwọ tiketi n'ihu oge enyemaka gị mmefu ego ya nwere ike nakwa aka ekwe nkwa na ị debere oche maka gị dum njem. Na ìhè nke n'oge ntinye akwụkwọ tiketi ịbụ nke kacha uru, anyị nwere ike ikwu-egbu osisi na akwụkwọ tiketi ka anya dị ka ha na-aghọ dị (2-3 ọnwa tupu njem). Ọzọkwa, ịhazi njem gị-oge nwere ike ime ka ị zere ìgwè mmadụ ma nweta ọnụahịa ka mma. Ghara ikwu, na ịkwado n'oge pụrụ inyere gị aka izere nnukwu ìgwè mmadụ na nnukwu queues. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị akwụkwọ na-aga njem nleta hotspots n'oge elu oge ugboro ka July / August, o yikarịrị ka ị ga-ezute ndị obodo ma yikarịrị ka ndị njem nleta ga-agba gị gburugburu. Yabụ ọ bụ ezie na ịnwere ike ịhụ ọhụụ niile n'oge a, ị ga-atụfu ezigbo ahụmịhe. Na ihe omume ị na-eme dị ka di na nwunye n’otu otu inwere ike ikwado ọnụego egosighi maka njem gi. Ma, cheta na ndị a ego ga naanị-nti ma ọ bụrụ na ị na-anọ ọnụ dị ka a di na nwunye / otu maka dum oge nke njem.
First ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ maka njem akwụkwọ bụ na: mba na Europe agbasaghị nwere nkwekọrịta n'etiti ha na-enye ohere njem na-aga gafee ókè-ala-enweghị na-egosi njem akwụkwọ. Mba European Union, ọ kachasị, ekwe njem na-ahapụ na-abanye na-enweghị na-egosi akwụkwọ ikike ngafe. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile European Union na mba na-ekere òkè nke a na-emeghe ókè iwu dị ka Croatia, Bulgaria, na Romania. Na ntule ndịiche, enwere mba ndị na esoghi na European Union na esonye na nkwekọrịta ahụ dika Switzerland na Norway.